आत्मा र परमात्माको खोज – मझेरी डट कम
आखिर बुद्धले आत्माको निरन्तरतालाई बुझेपछि शरीरको मोह त्यागेका थिए। मनको पछि लाग्नेहरू मान्छे र आत्माको पछि लाग्नेहरू बुद्ध हुन्छन। आत्माको हिंशा नगर्न सल्लाह दिएकै आत्माको एकरुपतामा नै हो। आत्मालाई बीचलित नपार्न बुद्धले संसारलाई झकझकाएका हुन। आयु नपुग्दै कुनै घटनाद्धारा मरेको आत्मा र समय नपुग्दै फलेको फलको अवस्था एउटै हुन्छ। बीचलित आत्मा प्रेत आत्माको रुपमा भौतारिएर दुख झेल्दछ। हिंशामा आत्मालाई नररुवाउ। आत्मालाई शान्तिले नै प्रज्ज्वलित गर्छ। शान्ति बहुत ठुलो शक्ति हो जहाँबाट आत्माले चियाउन सक्छ हरेकको मनमा अनि हरेकको जीवनमा। प्रजातन्त्रमा आत्मालाई बीचलित पार्दैनन। किनभने प्रजातन्त्र नै हरेकको आदर र सत्कारबाट जन्मने सिद्धान्त हो। उच्च बीचार र ब्याबहारबाट जन्मने हो। राजनीति शैतानिक आगो हो जहाँ हरेकको आत्मा डडाउने काम गर्छ। शैतानिक आगो रगतले मात्रै निभाउदछ। त्यसैले धर्तीमा रगत भोक खाने राजनीति अक्तीयार गरेका छन। आपसी द्वन्द्व नै समधान बनाएका छन। पृथ्वी सबैको साझा घर हुदा हुदै पनि धेरै घर बनाउनु परेको छ। मानवजाती एउटै जातीको भए पनि भेदभावले अनेक जातीमा छुटयाएको छ। यही नै राजनीतिको उपलब्धी हो। म यो उपलब्धी मेटाउन चाहान्छु। परम शान्ति बिनाको पृथ्वी नै खल्लो भो। दैविय शक्ति, धर्म, खुशी, कर्तब्य, गतिशिल्ता, आत्मीय सम्बन्ध, सदभाव, सदज्ञान, कल्पना, बुद्धि, बिज्ञान, अनुसन्धान, खोजी, न्याय, सत्य, आस्था, दर्शण, आदर्श त्याग, सृजना समझदारी, शान्ति जस्ता गुणहरू नै प्रजातन्त्रका बलिया जग हुन। अथार्थ मानवता बिनाको प्रजातन्त्र रस बिनाको फल नै हो। रस नभए कस्ले फलको आस गर्छर। मेरो देशमा पटक पटक रस बिनाको फल फलाउन खोज्छन। मलाई यहीमा नै अन्तरबिरोध छ। भगवत गीता बिस्वका मानव जातिका लागि हो तर बाइबल पढ्नेले गीतालाई सोत्तर-स्याउलो ठान्दछन। गीता पढनेले बाइबललाई बेकार ठान्दछन। यो होइन हरेक ग्रन्थ ज्ञानका पुन्ज हुन। जुन जहाँबाट जन्मयो त्यो त्यही गएर सकिन्छ। एकाइसौ सताब्दीको कुटिल प्रजातन्त्र मैले खोजेको होइन। रुखहरू आफ्नो फलखानबाट कस्लाई रोकेका छन र….। हो प्रजातन्त्र त्यही नै रुख हो जहाँका जनताहरू फलखानबाट कहिल्यै बन्चित हुन्नन। शक्ति, स्रोत र साधन सबैको पेवा हो यो प्रजातन्त्रले नै सिकाउछ। मान्छेले नै आफ्नो कुटिल स्वार्थसिद्धिका लागि रुखको फल खानबाट रोक लगाएको छ। यो नै अन्त्य हुनु पर्छ। यो विभेद हटाउनु आवस्यक छ। यहाँ कहिल्यै आफूले भने जस्तो भएन जहिले पनि राजनैतिक अन्धकारले छाइ रह्यो।
लोभ लालचको पछि लाग्दा मैले ईस्वर नै बिर्सेको छु। मैले दैवलाई पनि छोडेर लालचको पछि लागेर अनमोल जीवनलाई गुमाइरहेको छु। ब्रह्मारुपी महासागरबाट, बुँदरुपी जीवन लिएर म यो सपनील संसारमा आएँ। नाता, माया अनि लोभको बन्धनमा परें जसरी हावा बेलुनमा भित्रै बस्न बाध्य छ त्यसैगरी यो शरीरको बेलुनमा स्वास बसेको छ। आखिर जीवन यही बेलुन रहेछ। कति कमजोर जीवन। कति शुक्ष्म यो जीवन। म त्यही बिहानीमा टल्कने सीतको थोपा भएको छु। मेरो लोभलाई नष्ट कसरी गरुँ म? मेरो अहंकारलाई कसरी जलाउ म? मेरो इर्ष्यालाई कसरी मारिदिउ? जसरी बिषालु सर्प मार्न खोज्छन। त्यसै गरी म अरुको नजरमा परेको छु। विष बिनाको सर्पलाई मार्न खोज्दैनन। बरु खेल्न र खेलाउन खोज्छन। म यही अंहकारद्धार सताइएको छु। अहंकार नै अन्त्यष्टी हो जीवनको। योबाट पन्छिन चाहान्छु। राम्रो बीचारले सबैथोक राम्रो हुन्छ। नराम्रो परिस्थितिलाई पनि राम्रो बनाउछ। जसरी सर्पले आफ्नो काँचुली फाल्छ त्यसै गरी मेरा सबै खराब तत्वहरू फाल्न खोजेको छु। । हे लोभ सबैथोक दिन्छु तिमी मबाट जाउ। म खोला बनेर सागर पुग्न चाहान्छु। यताउता लरखराउने खोला कहिल्यै सागरमा पुग्न सक्दैन। चीर निन्द्रा नै मृत्यु हो। दिनमा एक पटक सुतेकै छु र पनि फेरि सधैंका लागि सुत्नुपर्ने।….जो आत्माले देख्छ त्यो नै जीवन हो। जो नखोजेर पाइन्छ, न रोजेर भेटाइन्छ। न देखेरै देखिने, न सुनिएरै सुनिने, जो न खाएरै खाइन्छ। त्यो भन्दा सत्य अरु के होला। मृत्युपछि त्यही लामो सपनाले पछयाउछ। जीवन केवल सपना नै त रैछ। सपनाको महासागरमा जीवनलाई पुर्याउनु छ एकदिन। कठै सोच्दा पनि अनौठो लाग्छ। के म त्यो सपनासँगै हराउछु त? हो म हराउछु। म चाहेर फेरि आउन सक्दैन। म एकदिन बिहानीको सित हराए झै हराउछु। हो म एकदिन त्यो मृत्युको क्षितिज भित्र संधाकालागि हराउछु। मेरा स्मृतिहरू बिस्तारै बिस्तारै हराउछन। बास्तवमा सबै थोक हराएर पाउने के त? …पाउने केवल कर्म नै हो। कर्मले नै मान्छेलाई अमर बनाउछ। मरेर नमरेकाहरूको बीचमा पुग्न पाए हुने थियो। थाहा छैन के हुन्छ कहाँ पुगिन्छ। सबैभन्दा पीडा नै शरीरबाट प्राण पखेरु छोडदा हुन्छ। हुन पनि यति माया गरेर बसेको प्राण झटट छोडेर जान पनि गर्यो। फेरि कता जान्छ। के हुन्छ। यी सबै कल्पनाका भुवा हुन जो स्वतन्त्रसँग उडीरहन्छ। मरण सरल त ति भाग्यमानीहरूलाई हुन्छ जो पाप कर्मबाट मुक्त हुन्छन। मन शरीर र आत्माको बीचमा बसेर दुख भोग्छ। शरिरमा मनले नै अनुभूति गर्छ। मन दुखे शरीर दुख्ने हो नत्र दुख्दैन। मैले एउटी केटीलाई मन पराएँ। मनले उ बिना बाँच्न नसक्ने भो। एकदिन एकान्तमा भेटे। उनी केही पर थिइन तर मेरो मनले उनलाई स्पर्श गर्यो। सबै प्राप्त गर्यो र तृप्त भयो। मैले भोलिपल्ट सोधे के तिमीले स्पर्श गरेको थाहा पायौ त?। उनको जवाफ थियो। मैले थाहा नै पाएन। मैले सोचे आखिर त्यो केटीबाट प्राप्त हुने रस आखिर यही मनमा नै रैछ। मनले प्राप्त गरे अरु केले प्राप्त गर्न बाँकी रह्यो र। मनले स्पर्श गरेको तेही मनको केटी नै हो त्यो होइन।